Semalt: Combien De Temps Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga -
Search keywords, nke bụ otu akụkụ dị mkpa nke ọ bụla nchịkọta obodo, adịla kemgbe ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, n'oge ndị gara aga, a na-enyocha ọtụtụ okwu ndị a. Oge ụfọdụ, mgbanwe ndị a dị oké mkpa, mgbe ụfọdụ ka ọ dị ntakịrị. N'ọnọdụ abụọ, ọdịdị dị nro nke usoro a na-arụ ụka banyere mkpa nke ọchụchọ site na mkpụrụ okwu maka ntinye aha.
Jack Miller, onye isi nke ahịa ahịa nke Ọkachamara , analyze the factors that now define and further the importance of keyword search.
Okwu mkpado na-anọgide na-aba uru n'ime ihe dị iche iche n'ihi na ha na-arụ ọrụ dị mkpa na-enyere gị aka ịmepụta site na di iche iche na-achọ ihe. Nchọpụta site na okwu-Keywords ị na-enye ohere ịchọta okwu ndị ị na-enye:
Elu mgbasa ozi. Ị obtiendrez nke ọhụrụ nleta n'ihi na gị na saịtị na-aha n'ime search results.
Relevance. Niile nchọpụta ọchụchọ ga-adakwute na ị na-eme atụmatụ ma na-eju afọ nke ndị na-abata ọrụ gị.
Nke na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ị nwere okwu ndị bụ isi, nke a pụtara na ị ga-enwe ike ịmekwu oge maka ọkwa ị chọrọ ịhọrọ.
Na mbụ ụbọchị nke ọchụchọ site na mkpokọta, ihe kacha mma na-eche echiche banyere ndị ọ bụla n'ime gị ọdịnaya n'ime ọ bụla balise meta dị ka ị nwere ike. Site na Google Analytics, Google na-ekpughekwa ọtụtụ ozi gbasara ọchụchọ ọchụchọ na weebụ na ọchụchọ ọchụchọ na gị na Weebụ..Ozugbo ị chọtara nke a na ndepụta nke okwu na trafic elu na na ike concurrence, ị nwere ike ịmepụta kpọmkwem gị na saịtị wụsa ndị a chọrọ. Ọtụtụ ihe ndị Google rịọrọ nwere njikọ nke ịchọpụtaghị nke ọma, nke pụtara na ha ga-eme ka okwu gị ma ọ bụ okwu gị na ndị ọzọ na-egosi na ị ga-adọrọ mmasị gị ma ọ bụ ndị ọzọ okwu na okwu na weebụ.
Na 2013, Google bipụtara nsonaazụ ọhụrụ aha ya bụ Hummingbird, nke na-ewebata echiche nke «search semmantique». Mgbanwe a gbanwere otú nyocha ọchụchọ na-esi na-abanye na ntinye akwụkwọ. N'ihe na-eme nnyocha dị mfe nke onye chọrọ, nke a na-eme ka Google nwee ike ịghọta ihe ndị dị n'azụ onye chọrọ onye ọrụ. N'ihe dị ka ọnụ ọgụgụ aha, ọ dị ka ọ bụ mgbanwe dị ntakịrị, ma nke a nwere mmetụta dị ukwuu banyere ụzọ ọchụchọ kachasị mma na-eleba anya n'okwu ndị ahụ.
Nke a gbanwere SEO abụghị naanị na okwu okwu na okwu. Taa, o nwere ike ịbụ ndị na-ekwu okwu na okwu dị iche iche, tinyere na ị na-adịghị mfe, ma ị nwere ike na-agụnye okwu na okwu ndị na-adịghị ọbụna adịghị na gị na peeji nke. Okwu ndị a bụ aha okwu nke okwu mkpịsị ogologo ogologo. Ha na-emepụta site na Hummingbird ma na-eme ahịa nke okwu ọnụ ọgụgụ na-enweghị isi. Nke a pụtara na ebe ọ bụ na ị na-etinye okwu ndị dị na ya, ndị ọrụ kwesịrị ịmalite ịmepụta ọdịnaya gburugburu otu okwu ma ọ bụ otu okwu ma tinye uche na isi okwu.
Ntuchi nke Google na isi okwu amalitela na Google Analytics ma nọgide na-abanye AdWords. Nke a pụtara na-agba ume ka ndị mmadụ na-eji ha mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ ma na-azọpụta. N'ezie, ọ na-abụ oge ụfọdụ dị mkpa maka ndị ọkachamara nke ahịa na-emepụta atụmatụ cohérents d'optimization des mots.
Na ihe niile a kpọtụrụ aha n'elu, anyị ga-aghọta na teknụzụ ọhụrụ na-abanye n'ime egwuregwu, dịka ọmụmaatụ, dịka nke ahụ mere na digital assistants dị ka Cortana na Siri. Ọ na-akwado ndị mmadụ na-eme nchọgharị na mkparịta ụka, nke na-agbanwe kpam kpam le egwuregwu. La réalité augmentée, ndị wearables na la réalité virtuelle ga-agbanwekwa otú ndị mmadụ si eme nnyocha na otú arụmọrụ usoro. Na ọtụtụ mgbanwe ndị kwesịrị ịbanye na ike, ịchọpụta site na mkpụrụ okwu ga-eme ka otu, mana ọ gaghị adị njọ mgbe ọ bụla. Nke a ga - abụ mgbanwe na - aga n'ihu na nyocha ọhụrụ.